PSJTV | नेपाल प्रहरीका ६ एसपीको काज सरुवा, को कहाँ ?
नेपाल प्रहरीका ६ एसपीको काज सरुवा, को कहाँ ?
काठमाडौं: प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरीका ६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका एसपी रमेश थापाका अनुसार ३ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्।
उनका अनुसार महोत्तरीमा एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, गोरखामा ओम अधिकारी र बाग्लुङमा नवराज भट्ट खटाइएका छन्। हाल महोत्तरीमा कार्यरत एसपी ईश्वर कार्की महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखामा पठाइएका छन् भने गोरखाका एसपी भोला रावल प्रदेश नं. ६ प्रहरी कार्यालय पठाइएका छन्।
बाग्लुङका एसपी कृष्णहरि शर्मालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव अधिकार इकाइको जिम्मेवारी दिइएको छ।